Famokarana zavamaniry | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Famokarana zavamaniry
Daty: ny toetra mahasoa sy ny fanoherana
Ny daty dia vokatry ny palma daty. Efa ela izy ireo no nividy ny karazan-tsakafo. Ho takatsika ny akora simika sy ny tombontsoa mety ho an'ny vatana. Ny kalôria sy ny fiaraha-miorina simika dia vokatra ara-tsakafo noho ny voka-dratsin'ny kômôridra (asehon'ny glucose, fructose, sucrose) izy ireo.
Fomba fananganana tulip, torohevitra momba ny fikarakarana voninkazo lohataona
Maro amintsika no zatra mandinika ny tulip "voninkazo 8 martsa." Eny, zavamaniry marevaka sady marevaka, ravinkazo mivelatra miaraka amin'ny tendrony lavalava ary felana marefo dia matetika hita amin'ny karatra fiarahabana sy eo am-pelatanan'ny lehilahy izay miezaka manome azy ireo ho an'ny vehivavy. Saika ny olon-drehetra no tia tulips.
Ny endriky ny fambolena an-jatony, ny fomba hikarakarana ny mponina tsy mendrika ao am-pandriana
Ny tanindrazan'ilay andro anio dia Azia Atsinanana. Ity zavamaniry ity dia mahazatra ny olombelona hatrizay hatrizay, fa nanomboka tamin'ny 1753 kosa ny siansa vao niresaka momba ny andro iainana. Ny mpikaroka Soedoà Karl Linney dia nantsoina hoe plant gemerocallis, izay manambatra teny roa grika: hemera (andro, andro) ary callos (hatsaran-tarehy). Io anarana io dia midika fa ny hatsaran'ilay zavamaniry dia velona iray andro monja.
Ahoana ny fomba hananana edelweiss ao amin'ny zaridaina, ny fambolena ary ny fikarakarana ny "vonin'ny tendrombohitra"
Ny blume edelweiss dia heverina ho iray amin'ireo voninkazo mistery sy tsy fahita indrindra ao amin'ny fianakaviana Asteraceae. Eo an-tanimbary dia mitombo avo folo hektara eo amin'ny 2 metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina ny edelweiss. Tiany ny toerana mihidy sy sarotra. Fantatrao ve? Ny Edelweiss dia aseho eo amin'ny poketran'i Soisa. Ny Edelweiss dia mitombo 15 santimetatra, saingy misy tsangambato maro.
Clematis any Siberia: varotra samihafa, fambolena ary mikarakara fambolena
Androany dia miresaka momba ny fitomboan'ny Clematis any Siberia. Maro amin'ireo florist no mahafantatra an'io zavamaniry io, nefa maro no mino fa ny toetr'andro dia mahafinaritra ny toetr'andro mahafinaritra ary tsy mitombo any amin'ny faritra avaratra. Hanaporofo ny mifanohitra amin'izany izahay, misafidy ny karazana fitomboana indrindra ary milaza aminareo ny fitsipika momba ny fikarakarana. Ny karazana Clematis ho an'i Siberia Ny karazam-borona Clematis dia tsy mety amin'ny fambolena any Siberia. Noho izany, ireo vary izay mety hahatohitra ny hafanana sy ny hatsiaka dia nentina tao amin'ny USSR.
Voninkazo tsara tarehy, fambolena sy fiahiana
Ny voninkazo amidy Ny Imperial Grouse dia toeram-pambolena maharitra, ka andeha hijery akaiky kokoa ny fambolena, fikarakarana ary famokarana. Hazel Grouse Imperial: ny fanoritsoritana ny Imperial Grouse - tsy zavamaniry manaparitaka tanteraka izany, ary raha mikarakara ara-potoana sy ara-dalàna izy dia tsy hisy olana amin'izany.
Ny fomba hambolena sy fitomboan'ny jabora ao amin'ny dacha
Ny fiandohan'ny lohataona ho an'ny maro dia tsy mifandray amin'ny daty ao amin'ny kalandrie, fa amin'ny fisehoan'ny voninkazo voalohany, toy ny narcissus. Ny loko marevaka amin'ny voninkazo malamalama miaraka amin'ny karavasy goavam-be taorian'ny fotoam-pahaviniran'ny ririnina amin'ny hazo malemy dia manohina ny olona tsy miraharaha ny loko. Mifidy toerana ho an'ny narôzila. Mamboly aretin-tsaina iray, tranokely iray voaaro amin'ny rivotra ahitana hazavana tsara.
Ny zava-drehetra tokony ho fantatrao momba ny famokarana zavamaniry Cacti
Anatin'ireo zavamaniry ao anaty trano rehetra, ny cacti dia anisan'ireo olona sangany indrindra. Na dia mety tsy ho tsara tarehy tahaka ny any ivelan'ny mponina maitso ao amin'ny varavarankely aza ny bika aman'endriny dia maro amin'ireo zaridaina no tia azy ireo. Noho izany, raha te hahazo an'io zavamaniry ao an-trano io ianao, dia tena ilaina ny fahalalana ny fomba fanoratana ny cactus.
Hazo fotsy: famaritana ny karazana zana-ketsa sy ny lakroa
Ny zana-kavoana tsara indrindra: famaritana, tombony ary tsy fahampiana
Dokotera matavy avy ao amin'ny zaridaina. Inona no entina amin'ny dill ary ahoana no ampiasana an'io zavamaniry io ao amin'ny cosmetology sy aromatherapy?
Hazo aromatika mitombo
Tazo "Persimmon": mamafy ny zana-katsaka sy ny fikarakarana ny tranokala
Hazo fotsy mamy
Ny voankazo tany am-boalohany sy ny tsiro manokana - "voatokana ho an'ny Tsar" fanomezam-boninahitra: famaritana ny karazana vary, sary, fambolena
Ny karazam-bary mitovitovy amin'ny ririnina amin'ny fiainana andavanandro - pear "Decakrinka"
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Famokarana zavamaniry